Nigeria Oo U Yeedhanaysa Safiirkeeda Koonfur Afrika Xilli Soomaali Badan Hantidooda La Boobay - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaNigeria Oo U Yeedhanaysa Safiirkeeda Koonfur Afrika Xilli Soomaali Badan Hantidooda La Boobay
Johannesburg (JigjigaOnline) – Dowladda Nigeria ayaa sheegtay inay ka baaraandegayso la soo laabashada safiirkeeda Koonfur Afrika, taasoo muujinaysa heerka uu gaaray khilaafka labada dal u dhexeeya ee salka ku haya weerarrada ajaaniib naceybka ah ee maalmahan ka socday qeybo kamid ah Koonfur Afrika.
Wasiirka arimaha dibedda ee Nigeria ayaa ku tilmaamay rabshadahaasi wax aan la aqbali karin.
Madaxweyne Buhari ayaa ergay gaar ah u diray Koonfur Afrika si uu madaxda dalkaasi ugala hadlo dhibaatada jirta.
Weerarrada lagu beegsanayo ganacsiyada ay leeyihiin shisheeyahay ee dalka Koonfur Afrika ayaa ka caraysiiyay Nigerian badan oo dareensan in si gaar ah loo bartilmaameedsado.
Wasiirka arimaha dibedda ee Nigeria, Geoffrey Onyeama, ayaa warbaahinta u sheegay in xogta ay hayaan ay muujinayso in ilaa hadda aanu qof Nigerian ah ku dhiman rabshadaha ka dhacay Koonfur Afrika.
Haseyeeshee dowladda Nigeria ayaa ku tala jirta inay u yeerato safiirkeeda u fadhiya Koonfur Afrika isla markaana ay xukuumadda Pretoria ka dalbato inay magdhaw ka bixiso hantida muwaadiniinteeda looga burburiyay rabshadaha.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in dalkiisa aanu ka qeybgeli doonin Madasha Dhaqaalaha Adduunka ee todobaadkan ka furmaysa Koonfur Afrika.
Dad mudaharaadaya ayaa weerarro aargoosi ah ku bartilmaameedsaday ganacsiyada ay Koonfur Afrikaanka ku leeyihiin magaalooyinka waaweyn ee Nigeria, waxaana taasi ay keentay in shirkadda isgaarsiinta ee MTN oo laga leeyahay Koonfur Afrika ay xirto dhammaan xarumaheeda ku yaal Nigeria.
Xagee ayay ka yimaadeen shisheeyahay?
Ku dhawaad boqolkiiba 70 shisheeyaha Koonfur Afrika ayaa kasoo jeeda dalalka deriska la ah ee Zimbabwe, Mozambique iyo Lesotho.
Tirada soo hartay ayaa ah dad ka kala yimid Malawi, UK, Namibia, eSwatini (oo markii hore la oran jiray Swaziland), Hindiya iyo dalal kale oo ay Soomaaliya kamid tahay.
Dowladda Koonfur Afrika ayaa BBC-da u sheegtay in qiyaastii 3.6 milyan oo shisheeye ah ay ku nool yihiin dalkaasi shacabkiisu ka badan yahay kontonka milyan.
Gobolladee ayay ku badan yihiin weerarrada?
Gobolka Gauteng oo ay ku yaallaan magaalada Koonfur Afrika ugu weyn ee Johannesburg iyo caasimadda Pretoria ayaa ah halka ay ka dhacaan weerarrada ugu badan ee shisheeye naceybka ah.
Waxaa kaalimaha labaad iyo saddexaad ku kala jira gobollada Western Cape iyo KwaZulu-Natal oo ay ku taal magaalada Durban.
Weerarrada ayaa inta badan ka dhaca magaalooyinka waaweyn, balse waxa sidoo kale laga soo sheegaa degmooyinka iyo tuulooyinka.
Waxa ay inta badan ka dhashaan muran hoose oo u dhexeeya dadka dalka u dhashay iyo ajaaniibta oo lagu eedeeyo inay qaataan shaqooyinka ay u baahan yihiin Koonfur Afrikaanka.
Dhaqaalo xumida ka jirta Koonfur Afrika ayaa ka dhigtay in boqolkiiba 27 dadka dalkaasi ay shaqo la’aan ahaayeen dhammaadka sanadkii hore.